Browser များ | November 2019
အဓိက Browser များ
အဘယ်ကြောင့် Google မှ Third-party extension များ၏ installation ပိတ်ပင်ထားပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်
Chrome ကို browser ကို - အင်တာနက်ကို surfing များအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံး tools များထဲကတစ်ခု။ မကြာသေးမီကယင်း၏ developer များအပေါငျးတို့သအသုံးပြုသူများအလေးနက်စိုးရိမ်ရေမှတ်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုမိကြပါပြီ, ဒါကြောင့်အလွန်မကြာမီ Google က Third-party ဆိုက်များမှ extensions တွေကို၏ installation ပိတ်ပင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့် Third-party extension များ browser ကို Mozilla Firefox ကိုများနှင့်အခြား browsers တွေအင်တာနက်ကို "လေးထောငျ့ကှကျထဲက" ဟုအဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအပေါ်အနည်းငယ်ယုတ်ညံ့ Chrome ကိုပိတ်ပင်ထားခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။
သွားရောက်ကြည့်ရှုက်ဘ်ဆိုက်များ၏သမိုင်းကိုကြည့်ရှုဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အားလုံး browser များအတွက်သမိုင်းကိုရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
နေ့သည်ကောင်းသော။ အားလုံးအသုံးပြုသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့် browser ကိုသငျသညျခွငျးအားဖွငျ့လည်ပတ်ခဲ့စာမျက်နှာများ၏သမိုင်းမှတ်မိကြောင်းသတိပြုမိကြသည်ပင်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသို့သင်၏ browser မှလာရောက်လည်ပတ်သူ၏မှတ်ပုံတင်မဖွင့်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလအတွင်း ယူ. လျှင်ပင် - (သင်တန်း၏, သင်သည်သင်၏ browsing history ကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါဘူးမဟုတ်လျှင် ... ) သငျသညျဘဏ်ဍာစာမျက်နှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
2018 အတွက်အကောင်းဆုံးက Windows7ကို browser ဖြစ်လာကြပါပြီ
အင်တာနက်ကို ပို. ပို. အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့် optimized ဖြစ်လာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အစီအစဉ်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတွင်။ သူတို့ထဲကအကောင်းဆုံး, traffic ကိုကယ်တင်ဗိုင်းရပ်စ်ကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်လူကြိုက်များကွန်ယက်ကို protocols များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းတဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ရှိသည်။ 2018 ၏ရလဒ်များကိုအပေါ်အကောင်းဆုံး browser များပုံမှန် update များနှင့်အသုံးဝင်သောတည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးမှယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ကြသည်။
Mozilla Firefox ရဲ့အဖြစ်အသုံးဝင်သော Add-ons တွေကိုနှင့် Plugins ရဲ့စာရင်းတစ်ခု, သင်နေရာလေးကိုအတွက်လာနိုငျ
Mozilla Firefox ရဲ့ - လူကြိုက်များတဲ့ browser ကို, စစ်ဆင်ရေး၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်မြန်နှုန်းပေးထားပါတယ်။ ဒီစုဆောင်းမှုအတွက်အစီအစဉ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အကွာအဝေးတိုးချဲ့ဖို့အသုံးပြုနိုင်အသုံးဝင်သော Add-ons တွေကိုနှင့် plug-ins များကိုပေးစွမ်းသည်။ မာတိကာဒီနေရာမှာ Adblock အမည်မဖေါ်ပြ hola, anonymoX, Browsec VPN ကိုလြယ္ကူ Video Downloader Savefrom LastPass Password ကို Manager ကို Awesome ကို Screenshot Plus အား ImTranslator Visual Bookmark ပေါ့အာပ်ပိတ်ဆို့ Ultimate အမှောင် Reader ကိုဒီနေရာမှာ Adblock plug-in ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကွန်ပျူတာ applications များလူကြိုက်များသော Adblock အားဖြင့်ရောဂါကူးစက်မှု၏အန္တရာယ်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
အဆိုပါ browser မှာ Advertising ကြော်ငြာ - ဘယ်လိုဖယ်ရှားလိုက်ပါသို့မဟုတ်ဝှက်?
မင်္ဂလာပါ Advertising ကြော်ငြာယခု (တဦးတည်းပုံစံသို့မဟုတ်အခြားအတွက်ပါ) နီးပါးတိုင်း site ပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မှားဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါသည် - တစ်ခါတစ်ရံမှသာသူမ၏၏ကုန်ကျစရိတ်မှာဖန်တီးရန် site ၏အပေါငျးတို့သကုန်ကျစရိတ်ပိုင်ရှင်ချွတ်ပေးဆောင်။ သို့သော်အားလုံးကြော်ငြာအပါအဝင်ဖြည့်ညှင်းအတွက်ကောင်းလှ၏။ ဒါကြောင့်ထို site ပေါ်တွင်အလွန်အကျွံဖြစ်လာသည့်အခါ - ကသတင်းအချက်အလက် (ငါသည်သင်တို့၏ဘရောက်ဇာကိုသင့်ရဲ့ပညာအတတ်မရှိဘဲကွဲပြားခြားနားသော tabs များနှင့်ပြတင်းပေါက်များဖွင့်လှစ်ရန်စတင်နိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး) ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အဆင်မပြေဖြစ်လာသည်။
Yandex Browser ကို vs. Google Chrome ကို: အဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ဖို့?
ယခုအချိန်တွင်, Google Chrome ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံး browser တခုဖြစ်တယ်။ အသုံးပြုသူထက်ပို 70% ပုံမှန်ပေါ်မှာသုံးပါ။ သို့သော်များစွာသောနေဆဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို Google Chrome ကိုသို့မဟုတ် Yandex Browser ကိုပိုကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်, ပေါ်ပေါက်။ ရဲ့သူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဆုရှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ကြိုးစားကြပါစို့။ သူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများအတွက်တိုက်ပွဲမှာတော့ developer များ Web ကို surfers ၏ parameters တွေကိုတိုးတက်လာဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
Browser ကိုနှေးကွေး? လျင်မြန်စွာ Browser ကို - ကလွယ်ကူပဲ! Firefox ကို, IE ကို, Opera က 100% ၏ acceleration
ဘလော့ဂ်အပေါငျးတို့သစာဖတ်သူများမှနှုတ်ခွန်းဆက်! အင်တာနက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူအသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးလိုအပ်သော software များ - ယနေ့ငါ browser များအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်! သင်ဘရောက်ဇာထဲမှာအများကြီးအချိန်ဖြုန်းလိုက်တဲ့အခါ - ထို browser ကိုသာအနည်းငယ်နှေးကွေးလျှင်ပင်, ကအလွန်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် (နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု၏နောက်ဆုံးအချိန်မှာ) ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် browser ကိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်? ကအရှိန်မြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
နေ့သည်ကောင်းသော။ ကျွန်မဘရောက်ဇာကိုဘရိတ်ဖြတ်ပြီးနီးပါးတိုင်းအသုံးပြုသူက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုသောအခါထင်ပါတယ်။ ထို့အပွငျက ... နှေးကွေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သာ browser ကိုတားစီးနိုငျသောကွောငျ့အရာများ၏အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည် - တွေအများကြီးပေမယ့်ဒီဆောင်းပါးမှာပါငါသုံးစွဲသူအများစုအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်လူကြိုက်အများဆုံးအာရုံစိုက်ချင်ပါတယ်။
အများစုမှာ browser များ 2018
နေ့သည်ကောင်းသော, ချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်းများကို! စိတ်မကောင်းပါဘူးငါဘလော့ဂ်အတွက်မွမ်းမံမှုများခဲ့ကြပြီမဟုတ်, ငါပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ကတိပေးနှင့်မကြာခဏဆောင်းပါးတွေနှင့်တကွသင်၌မွေ့လျော်။ ယနေ့တွင်ငါသည်သင်တို့ကိုငါသည်ဤအထူး operating system ကိုသုံးပြီးတာပါ, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကြောင့်အာရုံစိုက်သွားပေမယ့် Windows ရဲ့ယခင်ဗားရှင်းမ၏အသုံးပြုသူများအတွက်အထူးသဖြင့်ခြားနားချက်တာက Windows 10 တို့အတွက် 2018 အတွက်အကောင်းဆုံး browser များအဆင့်အဘို့ပြင်ဆင်ကြပြီ။
Browser ကိုသမိုင်း: ဘယ်မှာကြည့်ဖို့နှင့်မည်သို့ရှင်းလင်းဖို့
အင်တာနက်ပေါ်ရှိကြည့်ရှုအားပေးအားလုံးစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပြန်ကြားရေးအထူးမှတ်ပုံတင် browser မှာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုသင်ပြသစဉ်ကတည်းကအချိန်ကိုလပေါင်းများစွာယူလျှင်ပင်တစ်ယခင်ကသွားရောက်လည်ပတ်စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကို web surfer ၏သမိုင်းအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ site ကိုမှတ်တမ်းများ, downloads, နှင့်ပိုပြီး၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုနှက်လျက်ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဘရောက်ဇာကိုဖွရှေငျးခအတွက် site ကိုမဖွင့်
အင်တာနက်ပေါ်ရှိအလိုရှိသောစာမျက်နှာဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း - အသုံးအများဆုံးပြဿနာများ၏တဦးတည်း။ လိပ်စာဘားမှာအမည်အားမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒါလိုအပ်သောသော site ကို, မဖွင့်ဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်။ ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများအတွက်အဆိုပါအကြောင်းပြချက်အမြင်အာရုံချွတ်ယွင်းခြင်းမှအထိနှင့်ပြည်တွင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုအောင်မြင်မှုများအဆုံးသတ်ရေး, များစွာသောဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သို့လျင်မြန်စွာပြီးခဲ့သည့် browser ကို tab ကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လှစ်
မင်္ဂလာပါ ဒါဟာခညျြးနှီးဆှေးနှေးယ့်ပုံပဲ - ကို browser အတွက် tab ကိုပိတ်ဖို့စဉ်းစား ... ဒါပေမဲ့ခဏ၌သင်တို့နားလည် - ထိုစာမျက်နှာသို့ထပ်မံအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်သိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်းအလိုအရ "ဆိုလို၏ဥပဒေ," ဒီက web စာမျက်နှာ၏လိပ်စာမအောက်မေ့နိုင်ပြီး, ဘာလုပ်သနည်း ဒီ Mini-ဆောင်းပါး (တိုတောင်းသောညွှန်ကြားချက်များ) ၌ငါတံခါးပိတ် tabs များ restore ကူညီပေးပါမည်သည့်အမျိုးမျိုးသောလူကြိုက်များ browser များများအတွက်အနည်းငယ်အမြန် Clavey ကိုငါပေးမည်။
နေ့သည်ကောင်းသော! ယနေ့ငါကအရမ်းမကြာခဏလူတွေသူတို့အားက်ဘ်ဆိုက်များရလွယ်ကူပိုက်ဆံ Scan ကိုဖြစ်လာကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရာတစ်ခုတည်းဖိုင် (ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်) အကြောင်းပြောဆိုချင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်များစွာသော antivirus program များပင်ခြိမ်းခြောက်မှုအကြောင်းကိုသတိပေးဘူး! မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့တကယ်တော့ငါတတိယပါတီက်ဘ်ဆိုက်များသို့ "ပစ် ချ. " မှအသုံးပြုသူများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အတော်ကြာ hosts file ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ကြရသည်။
က New features တွေကို Google က Chrome 67: အဆိုပါ browser ကို update ကိုအပြီးလက်ခံရရှိ
Google Inc. တိသူတို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ပုံမှန် update ကြေငြာလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်ဇွန်လ 1, 2018 Google က Windows အတွက်က Chrome, Linux MacOS နှင့်ယနေ့၏မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများအားလုံး၏ 67 version ကိုလောကီသားတို့သည်အကိုမြင်တော်မူ၏။ developer များမတိုင်မီဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့, ဒီဇိုင်းနှင့် menu ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်အလှကုန်ပစ္စည်းအပြောင်းအလဲများကန့်သတ်မရဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အသုံးပြုသူများကိုအသစ်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအရေအတွက်ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
(သင်ထို site ၏စကားဝှက်ကိုမေ့လျှင် ... ) ဘယ်လိုသင် browser မှာစကားဝှက်ကိုသိလား
နေ့သည်ကောင်းသော။ ခေါင်းစဉ်အတွက်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းတစ်ခုကို :) ။ ကျွန်မအင်တာနက်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသုံးပြုသူ (ထက်ပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းတက်ကြွ) ဝက်ဘ်ဆိုက်များများစွာ (စသည်တို့ကို Electro-mail ကို, လူမှုကွန်ယက်များ, ဂိမ်းအချို့မျိုး,) အပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့်ထင်ပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်သလောက်စီ site ပေါ်တွင်စိတ်ကို password များထားပါ - က site ကိုရိုက်ထည့်ဖို့အချိန်ရှိလာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးကြောင့်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး!
Google Chrome ကသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုဖတ်
Google Chrome ကသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုစိစစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးအင်တာနက်ကို browser များ, မသိမသာကွန်ပျူတာဖိုင်များကိုလေ့လာနေ antivirus ကို device ကိုတညျဆောကျ။ ဤသည်ကို Windows operating system ကိုအပေါ်ကွန်ပျူတာများသက်ဆိုင်သည်။ အဆိုပါ device ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင်အချက်အလက်တွေအားလုံးကို, စိစစ်သည်။ Google Chrome ကသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုဖတ်?
https://termotools.com my.termotools.com © Browser များ 2019